Caqliga Eebbe – Kaasho Maanka
Waxa aynu nahay dad mu’miniin ah oo caqligooda aan adeegsan ee caqliga Eebbe ka danbeeya xataa haddii uu caqliga Eebbe yahay wax aan la fahmi karin.
Caqliga Eebbe waxaa ka mid ah cadaabta aakhiro oo ah in qof nool la gubo oo markii uu dhuxul noqdo haddana la soo nooleeyo oo la gubo oo gubitaankaas lagu wado weligiis. Caqligaas Eebbe la ma fahmi karo cid uu dan u yahay oo Eebbe laftiisa xataa wax dan ahi ugu ma jirto. Wadaaddada ugu kitaabbo badan haddii la weydiiyo in ay macne darro tahay in uu Eebbe qof gubo oo uu gubitaan ku wado weligiis waxa ay ku jawaabaan in ay arrintaasi murti Eebbe tahay. Qof in la gubo miyaa murti ah? Wax maslaxad iyo murti ahi ku ma jiraan in qof la gudo, in la soo nooleeyo oo haddana la gubana ciyaalnimo ayaa ku jirta oo waxaa roon in hal mar la gubo, ka dibna la iska daayo.
Caqliga Eebbe waxaa ka mid ah in dadka uu jecel yahay uu aakhiro geynayo geedo ay biyo hoos marayaan. Geedo ay biyo hoos marayaan in la arko maxaa maslaxad ah oo ku jirta? Waxaa ka sii daran in dadkaas dhirta iyo biyaha daawanaya la siinayo hilib shirbirood iyo qudaar. Sida la wada og yahay cuntadu raaxo ma aha ee waa wax ay dadka gaajo ku khasabto oo dhib iyo hawl ah. Wax maslaxad ahi ku ma jirto in hilib iyo qudaar la cuno. Waxaa kale oo dadka uu Eebbe jecel yahay intooda ragga ah meel loogu xeraynayaa naago aad u badan oo ay u galmoodaan. Sida la og yahay naago badan in uu hal nin u galmoodaa waa xigmad darro oo naag keli ah baa ninka macquulka ah ku filan. Ninba midka uu ka naago badan yahay waa uu ka maangaabsan yahay. Caqliga Eebbe ee kaamkaas ku saabsan waxaa ka mid ah in ay dadka kaamkaas ku jiraa khamri badan cabbayaan. Waxaa la wada og yahay aalkolada in aan raaxo loo cabbin ee loo cabbo in la isku suuxiyo, ee ma suuxdin baa janno iyo raaxo ah?
QORMO LA XIRIIRTA: Alle iyo Masayrka maxaa kala haysta?!
Si kasta oo loo eego dadka uu Eebbe gubayo iyo kuwa uu xerada qaxootiga hilibka iyo khamriga ku quudinayaa macquul ma aha, laakiin innagu muslimiin baynu nahay oo hoggaansan baa la i nooga baahan yahay ee fakar iyo fahmo la i noo ma dirin.
Ilaah janno Sawirka Jannada
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 23rd January 2019